Thunderbolt သည် iPhone ကိုသတ်နေခြင်းဖြစ်သည် Martech Zone
Thunderbolt သည် iPhone ကိုသတ်နေသည်
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 2, 2011 အင်္ဂါနေ့, စက်တင်ဘာလ 4, 2012 Douglas Karr
Walter Piecyk၊ BTIG သုတေသန လေ့လာသုံးသပ်သူက HTC Thunderbolt သည် Verizon စတိုးဆိုင်များ၏ ၂၈% တွင် iPhone ကိုအမှန်တကယ်ရောင်းသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲ
ယခုလတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှတင်ပို့ချက်အချို့ကိုစတင်ခဲ့သည်။ မွေးစားလျက်ရှိသောနည်းပညာကိုနားလည်ခြင်းသည်စျေးကွက်သမားများနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ မိုဘိုင်းအင်တာနက်တိုးတက်မှုသည်မည်သူမဆိုမျှော်လင့်ထားသည့်နှုန်းထက်များစွာပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ Super Bowl အတွင်း Chrysler ၏ရှာဖွေမှုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် desktop query များထက် ၄၈ ကြိမ်မြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း mobile ကိုရှာဖွေခဲ့သည် 102 ကြိမ်။ GoDaddy သည်မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုပြုခြင်းနှင့်အတူပုံမှန်ထက် ၃၈ ဆမေးမြန်းမှုပိုမိုများပြားသည် 315 ကြိမ်.
Verizon ၏ HTC Thunderbolt ကဲ့သို့သောကိရိယာများသည်ဤတိုးတက်မှုအတွက်လမ်းခင်းပေးသည်။ ဒါကအံ့မခန်းဖွယ် Android ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ တစ်လစမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ ငါအရမ်းသဘောကျသွားပြီးအဆင့်မြှင့်ဝယ်လိုက်တယ်။ ငါကရှိသည်ခဲ့ရသည်။ ဖုန်းကလှပတယ်။ အချို့သောရှေးရှေးများက၎င်းသည်ကြီးလွန်းသည်ဟုထင်ရနိုင်သည်။ iPhone4နှင့်ဘေးချင်းယှဉ်လျက် iPhone သည်အလွန်သေးငယ်သောပုံပေါ်သည်။ ပစ္စည်းများသည်အထင်ကြီးစရာပင်မခံစားရပါ။ iPhone4လိုပဲ Thunderbolt မှာဒုတိယကင်မရာလည်းတပ်ဆင်ထားပါတယ်။
မှတ်စု: ကျွန်ုပ်၏သမီးအတွက် iPhone4ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ (မ၊ သူသည် Thunderbolt ကိုမလိုချင်ပါ) ထို့ကြောင့်သူမကို Verizon သို့ပြန်ပြောင်းနိုင်သည်။ AT&T လွှမ်းခြုံမှုနှင့်ငွေတောင်းခံမှုများသည်အလွန်ဆိုးဝါးခဲ့သည်။ ငါနည်းနည်းသက်သာအောင်လုပ်မယ်၊ မိသားစုတစ်ခုတည်းငွေထပ်ထပ်ထပ်ရမယ်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေမကျဘဲပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရမယ်။
ငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလောက် Droid Pro နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးနှစ်သက်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏လက်ချောင်းများသည်ကီးဘုတ်နှင့်ရုန်းကန်နေရသည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက Thunderbolt ရှိ visual keyboard သည် Droid Pro ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ထက်ပိုမိုကြီးမားသည်။ ငါအများကြီးပိုလွယ်ရိုက်နိုင်ပါတယ် - အထူးသဖြင့်ငါအလျားလိုက်လှည့်သောအခါ! ပြီးခဲ့သည့်လကဖန်သားပြင်များအကြားတွင်ရှေ့သို့လှည့်ကြည့်ပြီးနောက် Thunderbolt ကိုငါမချနိုင်ခဲ့။
ဤတွင် Droid Pro၊ HTC Trophy နှင့် HTC Thunderbolt တို့ဘေးချင်းယှဉ်ထားသည်။
ငါ Windows Phone7ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ HTC Trophy ကိုလည်းစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ Windows Phone7ကိုလျှော့မတွက်ပါနဲ့။ သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ကကြော့ရှင်းလွန်းတယ်၊ ကျနော့်အမြင်ကတော့ iPhone နဲ့ Android ထက်သွားလာရတာပိုလွယ်တယ်။ ငါကဲ့သို့သောအေဂျင်စီများနှင့်နည်းပညာများသည် Windows Phone7သို့မသွားနိုင်သော်လည်းစီးပွားရေးလဲလှယ်ရေးဈေးကွက်သည်ကြီးမားသည်။ ငါနဲ့အတ္တလန်တာမြို့အထိငါနဲ့အတူလေယာဉ်ပေါ်ကလူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်ကိုပြခဲ့တယ်။ သူကမြောင်းကိုမစောင့်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ အချိန်ကပြောပြလိမ့်မည် - သို့သော် Microsoft ကော်ပိုရေးရှင်း၏အီးမေးလ်ကိုပိုင်ဆိုင်သော အချိန်မှစ၍ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ပြိုင်ပွဲကိုကျော်လွန်သွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။
ကံမကောင်းစွာပဲ HTC Trophy ၏ဟာ့ဒ်ဝဲသည်လည်ပတ်ရေးစနစ်နှင့်တန်းတူဖြစ်သည်ဟုမထင်ပါ။ အဆိုပါကင်မရာဘက်မှာပုပ်စပ်သောအနံ့။ ဘယ်ဘက်သို့ဓာတ်ပုံတွင်၊ ဘယ်ဘက်သို့ Thunderbolt (8 Megapixel) ဓာတ်ပုံ၊ Trophy (5 Megapixel) ကိုညာဘက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဗွီဒီယိုအတွက် Thunderbolt ဟာ 720 HD မှာမှတ်တမ်းတင်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါဘယ်သွားသွားလက်ကိုင်လက်ကိုင်ဗွီဒီယိုကင်မရာကိုငါနဲ့အတူထားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ထူးခြားသောဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်တစ်ခုမှာဖုန်းကိုဖြောင့်မတ်စွာမတ်တပ်ရပ်နိုင်ရန်ဆွဲဆောင်ထားသည့်ကျောဘက်ရှိကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မနေ့ညကကျွန်မအိပ်ရာဘေးမှာငါ့ရဲ့ညအချိန်နာရီဖြစ်တယ်။
Thunderbolt အကြောင်းကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ရသောတစ်ခုတည်းသောတိုင်ကြားချက်မှာဘက်ထရီသက်တမ်းဖြစ်သည်။ ငါတကယ်ဂရုမစိုက်ဘူး အစဉ်အားဖြင့်အားလပ်တဲ့ USB ဘက်ထရီနဲ့အားသွင်းကြိုးတွေနဲ့အမြဲသွားလေ့ရှိတယ်။ ငါမျက်နှာပြင်မှာစိုက်ကြည့်ကိုရပ်တန့်လို့မရပါဘူး။ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ကင်မရာလှိုင်းအသစ်က iPhone အတွက်အဆုံးဖြစ်ရင်ငါသိချင်တယ်။ Android နှင့် Windows Phone7Operating Systems နှစ်ခုစလုံးသည်သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီးထုတ်ကုန်အသစ်များသည်တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။
လူမှုမီဒီယာ Equity နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ
3:2011 pm မှာဇွန် 2, 08
Verizone မှာတရား ၀ င်ဂူဂဲလ် Nexus ဖုန်းများရရှိနိုင်ပါတယ်။ ငါကကြီးမားတဲ့ဖန်သားပြင်ထဲကိုတကယ်မပါ ၀ င်ပေမယ့် Android ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ် (ငါ့ရဲ့ Droid Eris ဟာ့ဒ်ဝဲဟာပထမဆုံးထွက်လာတဲ့စုံတွဲတွေမှာအရင်ကဘာမှမကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့တာတောင်မှ) ကျွန်တော့်နောက်ဖုန်းက Android လည်းပါလိမ့်မယ်၊ ဘယ်ဖုန်းလဲဆိုတာမသိသေးဘူး။
ဇွန် 3, 2011 မှာ 4: 17 pm တွင်
ငါထင်တာကတော့ဂူဂဲလ်အတွက်ကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မိုဘိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သတင်းကောင်း - နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီဖုန်းတွေအပေါ်ပိုပြီးမှီခိုနေရတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ muy နိုင်ငံမှာ Thunderbolt မရှိသေးဘူး (ကိုလံဘီယာ), ဒါပေမယ့် iPhone အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိဖို့သတင်းကောင်း။ နောက်ထပ် iPhone ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူဘာတွေဖြစ်နေလဲစောင့်ကြည့်ဖို့လိုသည်။
ဇွန် 3, 2011 မှာ 5: 43 pm တွင်
ဇွန် 13, 2011 မှာ 6: 04 pm တွင်
Thunderbolt ကိုရပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့တာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သည်။ Amazon Wireless မှတစ်ဆင့်၎င်းကိုဒေါ်လာ ၁၃၀ ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Verizon စတိုးမှတစ်ဆင့်ဝယ်ယူခြင်းထက် ၅၀% စုဆောင်းထားသည်။ အချိန်ကပြောလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Thunderbolt ကိုတစ်မိနစ်တိုင်းသုံးတယ်၊ ငါကပိုချစ်တယ်။
ဇွန် 13, 2011 မှာ 6: 16 pm တွင်